Wararka Maanta: Sabti, Jan 19, 2013-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay Aqoonsiga uu Mareykanku siiyay Soomaaliya iyo dhibaateynta Suxufiyiinta
Mudane Saacid ayaa sheegay in aqoonsiga dowladda Mareykanka ay siisay dowladda Soomaaliya uu albaabbada u furayo in dalal badan oo caalamka ka tirsan ay aqoonsadaan, isagoo xusay inay tani dhiirrigelinayso horumar ay muddo yar ku tallaabsato Soomaaliya.
“Aqoonsiga dowladda Mareykanka wuxuu irdaha u furayaa in dalal kale oo aan horay u aqoonsan dowladda Soomaaliya ay aqoonsadaan, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka intooda badan,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Saacid.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in dalalka caalamka oo dhan looga baahan yahay inay maraan jidkii uu Mareykanku maray, isagoo xusay in tani ay billow u tahay in Soomaaliya ay ka baxdo aqoosi la’aantii soo jirtay muddada dheer.
"Dadaalka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda ayaa ka dambeeyay in Mareykanku uu aqoonsado dowladda Soomaaliya; waayo waxaan dhisanay oo aan yeelanay dastuur, baarlamaan dimuqraaddi ah, xukuumad iyo weliba madaxweyne isbedel doon ah," ayuu yiri Saacid oo uga mahadceliyay dadka iyo dowladda Mareykanka aqoonsiga ay siiyeen Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha oo hadlakiisa sii wata ayaa yiri: “Waddamada IGAD ayaa horay noo aqoonsaday, kuwaasoo aan dhihi karo maba aysan suuro-gasheen in Soomaaliya ay gaarto halka aynu maanta marayso,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dhanka kale, ra’iisal wasaare Saacid ayaa ka hadlay xarigga wariye C/casiis Cabdinuur Ibraahim (Koronto) oo toddobaadkii labaad ku jira xabsiga dowladda, wuxuuna ku tilmaamay in arrintani uu aad isugu howlay sidii loo soo gabgabeyn lahaa, hay’addaha amniga iyo maxkamadana uu faray in si deg-deg ah kiiskan loosoo afjaro, haddii uu dembi ku cadaado warriyahana la waafajiyo sharciga, haddii uu ku cadaan waayana, sharciga lagu qaado. Mar uu ka hadlay dilka wariye ka tirsanaa idaacadda Shabelle loogu geystay Muqdisho shalay oo Jimco ahayd ayaa wuxuu yiri: "Aad baan uga xumahay dilka wariye Cabdi-xareed Cismaan Aadan; aad bay ii taabatay waxaana muragadaas la qaybsanayaa ehelladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday," ayuu ra’iisul wasaaruhu ku yiri shirkiisa jaraa’id.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaiya wuxuu shirkiisa jaraa’id kusoo gabgabeeyay in xukuumaddu ay ilaalinayso ayna dhowrayso xorriyadda hadalka iyo mida saxaafadda.
1/19/2013 7:21 AM EST
Sabti, Jannaayo 19, 2013 (HOL) —Boqollaal qoys oo dhawaan ka barakacay dagaallo iyo duqeymo jaziiradda Kudhaa ee gobolka jubada hoose ku dhexmaray xoogagga Al-shabaab iyo ciidamada Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhibaateeysanyihiin deegaano ku dhow-dhow Jaziiradaasi.